ဒပ်ဘ်နီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရူသာဖော်ဒီယမ် ← ဒပ်ဘ်နီယမ် → ဆီဘော်ဂျီယမ်
အတည်ငြိမ်ဆုံး ဒပ်ဘ်နီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 34 s 67% α 8.66,
ဒပ်ဘ်နီယမ် (Dubnium) ဒြပ်စင်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်တခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဓာတ်ခွဲခန်း၌သာ ဖန်တီးထုတ်ယူ ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏သင်္ကေတမှာ Db ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၀၅ ဖြစ်သည်။ Dubnium ဒြပ်စင်၏ တွေ့ရှိခဲ့သော အိုင်ဆိုတုပ် အမှတ်စဉ် ၉ မျိုး၏ atomic weight များမှာ ၂၅၅ မှ ၂၆၃ အထိရှိသည်။ ၎င်း၏ တည်ငြိမ်ဆုံး အိုင်ဆိုတုပ် အမှတ်စဉ်မှာ 268Db ဖြစ်၍ သက်တမ်းဝက်(half-life) မှာ ၃၂ နာရီဖြစ်သည်။ Dubnium ဒြပ်စင်ကို ၁၉၆၈-၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင်ရုရှားနိုင်ငံ Dubna မြို့ရှိ JINR ကောလိပ်ရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Dubnium ဟူသောအမည်သည် ၎င်းမြို့အမည်အား ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းဒြပ်စင်သည် အလွန်မတည်မြဲသောဒြပ်စင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အလွန်လျင်မြန်စွာ အခြားဒြပ်စင်များအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားသောကြောင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Dubnium ဒြပ်စင်၏သက်တမ်းဝက်(half-life)သည် ၃၄ စက္ကန့်ခန့် အလွန်တိုသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မလိုပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Hoffman၊ D. C.; Lee၊ D. M.; Pershina၊ V. (2006)။ "Transactinides and the future elements"။ in Morss၊ L.R.; Edelstein၊ N. M.; Fuger၊ Jean (eds.)။ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.)။ Springer Science+Business Media။ pp. 1652–1752။ ISBN 978-1-4020-3555-5။
↑ "Superheavy elements:aprediction of their chemical and physical properties" (1975). Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. Retrieved on October 4, 2013.
↑ Dubnium။ Royal Chemical Society။ October 9, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Münzenberg၊ G.; Gupta၊ M. (2011)။ "Production and Identification of Transactinide Elements"။ Handbook of Nuclear Chemistry။ Springer။ p. 877။ doi:10.1007/978-1-4419-0720-2_19။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ ၆.၄ Six New Isotopes of the Superheavy Elements Discovered။ Berkeley Lab (2010)။ May 5, 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 9, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Synthesis ofaNew Element with Atomic Number Z=117" (2010). Physical Review Letters 104. American Physical Society. doi:10.1103/PhysRevLett.104.142502. PMID 20481935. Bibcode: 2010PhRvL.104n2502O.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒပ်ဘ်နီယမ်&oldid=722893" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။